एक्ला रोशनको त्यो कार्य : जसले इलामेलाई फुटसल चिनाए - Purwanchal Daily
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १०:०७ मा प्रकाशित
“होइन ! फुटसल भनेको फुटबल नै हो कि के हो ? ए…ए फुटसल घरभित्र पो खेलिन्छ !”, डेढ वर्षअघि इलाममा फुटसल शुरु हुँदा बहुसङ्ख्यक इलामेले राख्ने जिज्ञासाका प्रतिनिधि प्रश्न हुन् यी । खेलमा अन्य पूर्वी पहाडी जिल्लाको तुलनामा इलाम अगाडि नै भए पनि फुटसल भने नौलै लाग्थ्यो धेरैलाई तर अहिले ती प्रश्नको जवाफ अधिकांशले पाइसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, धेरैले फुटसल हेरेका छन् भने केहीले खेलेका पनि छन् । छोटो समयमै इलामेलाई फुटसल चिनाउने श्रेय भने कुनै सङ्घ÷संस्था नभई एक व्यक्तिलाई जान्छ । फुटसलसँग साक्षात्कार गराउने व्यक्ति हुन् इलामे युवक रोशन राई । रोशनले नै इलाम नगरपालिका–९ मा फुटसल मैदान निर्माण गरेपछि धेरैले फुटसल नजिकबाट देखेका हुन् ।
“धेरै लगानी गरिएको छ । सरकारी सङ्घसंस्था र स्थानीय सरकारबाट पानी÷बत्तीकै पनि छुट दिँदा हुन्छ नि ?” रोशन भन्नुहुन्छ, “युवा सशक्तीकरणका नाममा स्थानीय तहले साह्रै धेरै रकम खर्च गर्छन् । युवाले नै खोलेको उद्यममा चाहिँ चासो नै छैन ।” आफूले पसिना बगाएको यस क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित संस्थालाई अनुदान र छुट दिनका लागि रोशन आग्रह गर्नुहुन्छ ।
Previous articleगोलीकाण्डमा पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्ष धरौटीमा रिहा
Next articleप्रदेश नं २ का एकपछि अर्को जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा